Sirni Awwaalaa Daani’eel Araap Mooyi gaggeeffame
Guraandhalaa 11, 2020
Keeniyaa gana 24 f ka gaggeessan pirezdentiin Keeniyaa lammaffaa Daani’eel Araap Mooy sirni awwaala isaanii harra gaggeeffamee jira. Prezdenti Mooyi torbee harraa dhalatanii ganna 95 tti hospitaala keessatti lubbuun isaanii du’aan ka dabarte yoo ta’u sirna awwaalaa biyyaalessaa isaaniif harra gaggeeffame kanarratti angawootni mootummaa Keeniyaa, biyyoottan ollaa gaanfa afriikaa argamanii jiru.
Lammileen Oromoo bara Daani’eel Araap Mooyi Keeniyaa jiraataan yaadannoo maal qabu?
Miseensa mana maree kutaa bulchiinsa Baariingoo ka ta’an ilmi Mooyi Geediyoon Mooyi, abbiyyoon isaanii Keeniyaaf bara gaggeessummaa isaanii waan gaarii hojjechuu himanii warra yeroo gaddaa kana isaan cinaa dhaabbate galateeffataniiru.
Paartii mormituu biyyattii keessatti ga’ee gudda ka qaban Raayla Odiingaas wal dhabdee Mooy duuka qaban furatanii waliin heera biyyattii akka yayyaban, ammas tumsa lammilee biyyattii walitti fiduu mootummaan Keeniyaa itti jiru waliin akka bocan dubbatan.
Awaala Mooyirratti ka argaman mootummooleen ollaa Keeniyaa, Mooyi oolmaa nuuf oolaniiru jechuun leellisan. Prezdentiin Sudaan Kibbaa Mooyi bilisummaa keenya akka argannu nu faana nama falme yoo jedhan, Yuweerii Museevenii fi Poowul kaagaameen ammoo Gamtaa Biyyoottan Afriikaa bahaa ijaaruu keessatti Mooyi nama utubaa turan jedhan.
Mootummaa Itiyoophiyaa bakka bu’anii awwaala kanarra ka turan Pirezdenti Saahle Werq Zewdee, "bara Mooyi Itiyoophiyaa fi Keeniyaan ollaa dansaa tura. Yoo mara gahee inni Igaad hundeessuu keessatti taphate, ka inni bara bara gaggeessummaa isaa bara 1986 keessa bahes gonkumaan hin dagaannu; Mooyi harra nubiraa dhabamanus hojii gaarii hojjetanii darban fufnee hojjechuun walitti dhufeenya gaarii Itiyoophiyaa fi Keeniyaa jidduu jiru ittuu cimsina," jedhan.
Keeniyaattaanis gama isaaniitiin Mooyi, bu’uraalee misoomaa biyyaaf diriirsuun ijoollee durbaa barsiisuu fi barnoota sadarkaa tokkoffaa tolan ijoolleen ol adeemtu akka barattu nama taasisan jechaan dubbatan.
Ganna 95 tti ka boqotan Daani’eel Toorooytich Araap Mooy abbaa ijoollee 8 ti.
USA nama bara 2020 pirezidaantii tahee isii bulchuu dandahu keessaa laallachumatti jirti.
Pirezidaantii Suudan ka durii, Omar al-Bashir mana murtii yakka addunyaa qoratutti kennanii himachuuf dubbii itti muran
Itiyoophiyaan Waaltaa Qorannoo Vaayrasii Koronaa Keessatti Gaggeessan Qabaachuun Ibsamee Jira
Magaala Jimmaa Keessatti Fiigichi Deeggarsa Dr. Abiyyif Gaggeeffamee
Araaraaf Balballi Amma Iyyuu Banaa Dha: Angawaa Mootummaa Oromiyaa
Nageenyi Magaalaa Teeppii Bakkatti Deebi’aa Jira: Angawaa Naannoo